DOOGEE Shoot 2 dia 69.99 euro ihany no vidiny amin'ny 9 martsa | Androidsis
Nanaitra anay tao amin'ny MWC 2017 i DOOGEE tamin'ny fijoroana feno fitaovana tena mahaliana noho ny sandam-bola. Nanam-potoana hitsapana telefaona samihafa izahay, toa ny DOOGEE Y6 Max 3D, ary izao vao niditra ny fandefasana ny DOOGEE Mitifitra 2, telefaona iray izay efa nolazainay taminao ary izany dia ho tonga amin'ny tolotra tselatra mahaliana.
Ary, tamin'ny alàlan'ny tranokalan'ny mpanamboatra azy manokana, DOOGEE dia nanambara fanentanana tena mahaliana izay ahafahanao mividy ilay DOOGEE Shoot 2 amin'ny $ 69.99, ankoatry ny fikarohana ny Shoot 1 amin'ny $ 109 ary ny Y6 Piano ho an'ny $ 149.99 ankoatry ny tolotra hafa. Raha mila fanazavana fanampiny momba ireo varotra tselatra ireo tsindrio eto.
Ity ny DOOGEE Shoot 2, telefaona mety hanombohana eo amin'ny tontolon'ny Android
Ny fijerinay taorian'ny fitsapana ny DOOGEE Shoot 2 dia tena tsara. Ny vatan'ny telefaona dia vita amin'ny polycarbonate, zavatra antenaina amin'ny finday avo lenta, saingy tokony holazaiko fa ny fanamboarana azy dia mihoatra ny marina ary mahatsapa tena tsara ny tanana an-tanana.
Finday somary mora ampiasaina izy io, miaraka amin'ny vitsivitsy mirefy 142.6 x 72.6 x 9.5 mm ary lanja 174 grama, ataovy azo ampiasaina amin'ny tanana iray ny Doogee Shoot 2. Mikasika ireo toetra ara-teknika dia manana ny telefaona DOOGEE vaovao quad core processeur izay mahatratra ny hafainganan'ny famantaranandro hatramin'ny 1.5 GHz miaraka RAM 1 GB, ampy hilalaovana lalao izay tsy mitaky enta-mavesatra be.
Hanombohana azy dia manana a mpamaky ny rantsantanana eo anoloana, antsipiriany mandinika ny vidiny. Avy eo dia ao ny azy baterian'ny 3.360 Mah, izay mampanantena fahaleovan-tena lehibe raha manisa ny lanjan'ireo fitaovana entin'ity finday ity isika.
Ary miaraka amin'ny rafitra roa miaraka amina fakantsary roa 5 megapixel miorina ao aoriana, izay manana haitao namboarina niaraka tamin'i Huawei, ny DOOGEE Shoot 2 dia haka sary misy vokany bokeh tena mahaliana izay hahafaly ireo tia sary.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Tonga ny DOOGEE Shoot 2 miaraka amin'ny tolotra tsy azo resena: amidy am-bidy amin'ny $ 69.99